Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Jet Airways 2.0: ụgbọ elu ọhụrụ
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • India na -agbasa ozi ọma • investments • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Jet Airways mụrụ ọzọ
Ozi ọma ọ bụla dị n'ihu ụgbọ elu India na -akpọ oriri. Yabụ, okwu banyere mweghachi nke Jet Airways mgbe ọ gbasasịrị nku ya ka ọ dị na Eprel 2019, ka a na -ahụta dị ka ezigbo akara nabatara nke ọma.
Ọdịdị ọhụrụ nke ụgbọ elu ahụ na -abịa site n'ụzọ nke revival site na odida.
Jet Airways mbụ hiwere isi na Mumbai, na ịlọ ụwa ga -ahụ ka ọ dabere na New Delhi.
Ọ na-achọ ịmalite ọrụ ụgbọ elu mba ofesi dị mkpụmkpụ na ọkara nke abụọ nke afọ na-abịa na ohere nke ụgbọ elu mba ụwa ma emechaa.
Avatar ọhụrụ - ma ọ bụ ịlọ ụwa ọzọ - nwere ike ịpụta ngwa ngwa na mbido afọ ọzọ, 2022, n'agbanyeghị na ọ dị obere.
Ọdịdị ọhụrụ nke ụgbọ elu ahụ na -abịa n'ụzọ dị iche nke a nwalere na mbụ. Jet Airways, ozugbo aha siri ike na nke a na -akwanyere ùgwù, ga -agbago na mbara igwe site n'ụzọ mgbazinye ego nke revival.
Na mbụ, ọ ga -abụ ụgbọelu na -ebu naanị mana ka ọ na -erule afọ na -abịa, Jet Airways 2.0 nwekwara ike fega mba ofesi. Ọchịchị ọhụrụ ahụ akọpụtabeghị nkọwa maka atụmatụ maka ọrụ mba ofesi, agbanyeghị, isi ụlọ ọrụ gosiri na ụgbọ elu ahụ nwere ike na-elele mpaghara Gulf maka ịmalitegharị ya mbụ.
mgbe mbụ Jet Airways sitere na Mumbai, nlọghachi ga -ahụ ka ọ dabere na New Delhi. Ọ ga -aga n'ihu na -enwe ọnụnọ siri ike ma dị mkpa na Mumbai, ntọala mbụ ya.
Ụdị nwe ihe ga -adịkwa iche. Naresh Goet bụbu onye na-akpọ mgbọ, mana ugbu a ụlọ ọrụ nke onye ọchụnta ego India nke nọ na UAE, Murari Lal Jalan, ga-anọ n'oche ọdụ ụgbọ elu. Jalan, onye na -eduzi Jalan Kalrock Consortium (JKC) nwetara ụgbọ elu India ala Jet Airways.
Otu onye isi ụlọ ọrụ kwuru na ụgbọ elu ahụ na-achọ ịmalite ọrụ ụgbọ elu mba ụwa dị mkpụmkpụ na ọkara nke abụọ n'afọ na-abịa.
Isi mmalite na -ekwu na na mbido, ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ ga -enwe ụgbọ elu 50 n'ime afọ atọ, na -atụ anya na ọnụ ọgụgụ ahụ ga -eto ruo 3 n'ime afọ ise.
Ọ bụrụ na emejuputa atumatu a, ndị na -ede akwụkwọ na ndị ọchụnta ego ga -enwe ezigbo obi ụtọ, ha ga na -elekwa anya mmepe nke ụgbọ elu ọhụrụ ahụ.
Mgbasawanye na ikike ikuku ga -abụ nnukwu mmepe, ọkachasị ebe ọ bụ na nsị nke Air India ka na -ewe oge.
Ụgbọ elu ahụ kwuru na ya ewerela ihe karịrị ndị ọrụ oge niile 150 wee na-achọ ịbanye n'ime ndị ọrụ 1,000 ọzọ n'ime afọ mmefu ego nke ugbu a. Ịrụ ọrụ ga -adị n'usoro ma ga -adị n'akụkụ niile.